अमेरिकामा एसाइलम पेन्डिङ भएका र स्वीकृत भएकाहरुका लागि ५ अध्यागमन सुविधा « Khasokhas
अमेरिकामा एसाइलम पेन्डिङ भएका र स्वीकृत भएकाहरुका लागि ५ अध्यागमन सुविधा
अमेरिकामा एसाइलम पेन्डिङ भएका र स्वीकृत भएकाहरुका लागि ५ प्रकारका अध्यागमन सुविधाहरु उपलब्ध रहेका छन् । त्यसमा पनि एसाइलम पेन्डिङ रहेकाहरुका लागि दुईप्रकारका मुख्य अध्यागमन सुविधाहरु रहेका छन् ।
एसाइलम स्वीकृत भएकाहरुका लागि भाषाकक्षा, नगद सहायता, स्वास्थ्य सहायता, जागिर खोज्न सहयोग लगायतका कैयन सुविधाहरु रहेका छन् । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएका सुविधाहरु भने अध्यागमन सुविधाहरु हुन् ।
पहिलो सुविधा हो, वर्क परमिट । एसाइलम पेन्डिङ भएको एकबर्षपछि वर्क परमिटको सुविधा लिन सकिन्छ । पूरानो नियम अनुशार १५० दिनपछि वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन सकिने भएतापनि ट्रम्पले गतबर्ष यो नियममा परिवर्तन गरेर एकबर्ष बनाएपछि कुर्नुपर्ने अवधि बढेको हो । तर कासा डे मेरिल्याण्ड ९कासा० वा एसाइलम सिकर एड्भोकेसी प्रोजेक्ट ९एएसएपी०को सदस्यता लिएर अहिले पनि १५० दिनपछि नै वर्कपरमिटका लागि आवेदन दिन सकिन्छ ।
कासा वा एएएसपीको सदस्यता कसरी लिने ? थाहा पाउन यहाँ क्लीक गर्नुहोस् ।
त्यस्तै दोश्रो सुविधा हो, एड्भान्स परोल । युएससीआईएसमा एसाइलम पेन्डिङ रहेका व्यक्ति एड्भान्स परोल लिएर अमेरिकाबाहिर यात्रा गर्न सक्छन् । तर अदालतमा एसाइलम पेन्डिङ रहेकाहरु भने एड्भान्स परोल प्राप्त गरेपनि अमेरिकाबाहिर यात्रा गर्न नहुने कानून व्यवसायी ज्यासन जुबोको सुझाव छ ।
एसाइलम पेन्डिङ भएका व्यक्तिले राम्रो मानवीय कारण पेश गर्न नसकेको खण्डमा युएससीआईएसले एड्भान्स परोलको आवेदन अस्वीकार गर्ने गरेको छ । त्यस्तै एड्भान्स परोलमा यात्रा गर्दा आफूलाई जुन देशमा खतरा रहेको भन्दै आवेदन दिइएको हो, त्यही देशको यात्रा गरेको खण्डमा एसाइलम नै अस्वीकृत हुने सम्भावना रहन्छ ।
त्यस्तै एसाइलम स्वीकृत भइसकेका व्यक्तिका लागि तीनप्रकारका अध्यागमन सुविधाहरु रहेका छन् ।
पहिलो, एसाइलम स्वीकृत भएको एकबर्षपछि ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । त्यस्तै ग्रिनकार्ड स्वीकृत भएको मितिले ३ बर्ष ९ महिनापछि अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ । तर तपाईको ग्रिनकार्डमा ग्रिनकार्ड स्वीकृत भएको भन्दा एकबर्ष पहिलेकै मिति उल्लेख छ भने तपाईले उक्त मितिबाट ४ बर्ष ९ महिना गणना गरेर अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।
कसरी गणना गर्ने? थाहा पाउन यहाँ क्लीक गर्नुहोला ।
सामान्यतया एसाइलमबाट प्राप्त ग्रिनकार्डमा जारी मिति ग्रिनकार्ड स्वीकृत भएको दिन नभई त्यो भन्दा एकबर्ष पहिलेको उल्लेख गरिन्छ । ग्रिनकार्डमा एकबर्ष पहिलेको मिति उल्लेख नभई स्वीकृत भएकै दिनको मिति उल्लेख भएको खण्डमा त्यही मितिबाट ३ बर्ष ९ महिना गणना गर्न सकिन्छ । ग्रिनकार्ड स्वीकृत भएपछि तपाईले स्वागत सहितको पत्र प्राप्त गर्नुहुन्छ ।
एसाइलमबाट ग्रिनकार्ड स्वीकृत भएको ३ बर्ष ९ महिना भयो, नागरिकता आवेदन दिनसक्छु ? कानुन व्यवसायी एलन वर्निकका सुझाव ।
दोश्रो, आई ७३० प्रकृया । एसाइलम स्वीकृत भइसकेपछि उक्त व्यक्तिले आफ्ना श्रीमान् वा श्रीमति र २१ बर्ष नपुगेका अविवाहित छोराछोरीहरुलाई अमेरिका ल्याउन सक्छन् । विगतमा एकदमै छिटो हुने यो प्रकृयाका लागि पनि अहिले एकदेखि दुईबर्षसम्म लाग्न थालेको छ । यो प्रकृयाबाट दम्पत्ति वा छोराछोरीहरुलाई अमेरिका ल्याउँदा भिसा नम्बर प्रतिक्षा गर्नु पर्दैन ।
तेश्रो, शरणार्थी ट्राभल डकुमेन्ट । एसाइलम स्वीकृत भइसकेपछि व्यक्तिले अमेरिकाबाहिर यात्रा गर्नु परेमा शरणार्थी ट्राभल डकुमेन्टका लागि आवेदन दिन सक्छन् । अहिले यो डकुमेन्ट पाउन ६ देखि १ बर्षसम्मको अवधि लाग्छ ।
युएससीआईएसले एसाइलम स्वीकृत भएकाहरु वा एसाइलमबाट ग्रिनकार्ड पाएकाहका लागि शरणार्थी ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्छ । यदि कोही व्यक्तिको एसाइलम स्वीकृत भएको छ तर एसाइलबाट ग्रिनकार्ड भइसकेको छैन भने अमेरिकाबाहिर गएर पुन अमेरिका प्रवेशका लागि शरणार्थी ट्राभल डकुमेन्टको आवश्यकता पर्छ । यो डकुमेन्ट अमेरिका छाड्नु अगाडि नै प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । अन्यथा अमेरिका पुन प्रवेश गर्नमा रोक लाग्नसक्छ वा देशनिकालाको प्रकृयामा राखिन्छ ।